5Jona 2013 : hevero ny fandanianam-poana, noho ny sakafo tsy lany sy ariam-potsiny!!! | mandimby maharo
5Jona 2013 : hevero ny fandanianam-poana, noho ny sakafo tsy lany sy ariam-potsiny!!!	Posted on 5 June 20135 June 2013 by Mandimby Maharo	1 300 000 000 t/taona ny sakafo very sy simba eto an-tany. 1/3 ny sakafo vokarina io. Atontanisa nahatonga ny Programan’asan’ny Firenenena Mikambana momba ny tontolo iainana hisafidy ny lohahevitra “Mieritrereta, Mihinana, Mikajia” ka anentanana amin’ny hoe hevero ny fandanianam-poana ataontsika, noho ny sakafo tsy lany sy ariam-potsiny isan’andro hentina hankalazana ny Andro eran-tany momba ny tontolo iainana amin’ity taona 2013 ity ireo.
Raha nanomboka tamin’ny taona 1972 no nankalazana ny andro ho an’ny tontolo iainan’ny olombelona dia ny fanentanana ny amin’ny fiarovana ny ala sy ny fambolen-kazo matetika no nentina nanamarihana izany. Ny tombana nataoan’ny Sampan’asan’ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo (FAO) nefa dia namoaka fa anisan’ny manimba ny tontolo ny fanarina sakafo ataon’ireo trano fisakafoanana sy ny olotsotra mpanjifa. Ankoatry ny fahasimban’ny tontolo iainana dia manary vola mitentina 1 lavitrisa isan-taona isika amin’ny fanariana ireny sakafo ireny.
Fahaverezana sy fanimbana sakafo miohatra amin’ny famokarana.
Noezahina noho izany ny hampandray andraikitra bebe kokoa ny tsirairay amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy amin’ity andro ity ihany, fa mandavan-taona satria misakafo isan’andro ny olombelona. Raha toa ka any amin’ny fijinjana-famokarana-fanodinana no ahitana ny fahasimbana, dia eny anivon’ny mpivarotra antsinjarany sy eny amin’ny trano sakafo kosa no tena ahitana ny fanimbana sy fanarina sakafo.
Ho an’i Afrika dia ny tsy fananana haitao afahana misoroka ny fahaverezana eny ampinjijana sy ny fitehirizana no tena mahatonga io fahasimbana io. 1/4 ny vokatra eny an-tsaha dia very avokoa noho ireo antony ireo. Na izany tsy voaahangona an-tsopitra, na izany lo ao ka voatery arina. Ho an’ny firenena tandrefana kosa dia ny fametrahana fenitra avo loatra afahan’ny vokatra fihinana amidy eny an-tsena no antony mahavery, na anariana raha ny marina kokoa ny sakafo.Eo koa ny toetsaina mifidifidy sakafo, toy ny tsy fihinanan-kena, tsy fihinanana afatsy ny vokatra natoraly…, izay mahatonga ireo entambarotra tsy misy mividy ka arina.
Ho an’ny Madagasikara dia any Antsirabe, faritra Vakinankaratra no ankalazana izany ando izany. Ho an’Analamanga kosa dia any Andramasina no ho atao ny fanamarihana.
Tags: 5juin, JME, Madagasikara, Sakafo, Tontolo iainanaCategories: environment, Uncategorized